बिक्री सक्षमता: बिक्री र मार्केटिंग बीचको अन्त बन्द गर्दै
बिक्री र मार्केटिंग बीचको ग्याप बन्द गर्दै
सोमबार, मार्च 4, 2013 मंगलवार, मार्च 5, 2013 जेन लिसाक गोल्डिंग
को विषय बिक्री फनेल परिवर्तन गर्दै हरेक कम्पनीको दिमागमा छ। परिवर्तनको एक ठूलो भाग भनेको हामी कसरी बिक्रीलाई हेर्छौं, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कसरी बिक्री र मार्केटि ofको रणनीति पहिलेभन्दा बढी मिलाइन्छ। संगठनहरूले विश्लेषण गर्नुपर्दछ कि कसरी उनीहरूको संगठन लगातार आधारमा बिक्रीमा आउँदैछ ताकि तिनीहरूले कुनै अवसरहरू गुमाउन्न्। के मार्केटिंगदेखि बिक्रीमा तपाईंको ट्रान्जिसनहरू सिमलेस छन्? के तपाइँ दुबै पक्षलाई पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ सही सम्भावितहरूलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ? यी प्रश्नहरू हुन् जुन तपाईंले नियमित रूपमा सोध्नु पर्छ।
बिक्री सक्षमता, मेरो विचारमा, दुई टोलीहरू (बिक्री र मार्केटिंग) सँगै ल्याउँदछ। यसले सहजीवी सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ, जहाँ एकको सफलता अर्कोमा निर्भर हुन्छ र यसको विपरित हो। नतिजाको रूपमा, यी टोलीहरू अधिक एकीकृत हुँदै छन् र कार्यप्रवाहहरू सिर्जना गर्दै छन् जुन ह्यान्डअफ्सलाई सजिलो पार्दछ र ग्राहकहरूलाई रोक्दछ।
टिन्डरबक्समा हाम्रा ग्राहकहरूले ग्राहकहरूको साथ प्रदान गरेर बिभिन्न संगठनहरूको विभिन्न काम गरेका छन् बिक्री प्रस्ताव प्रबंधन सफ्टवेयर। बिक्री प्रस्ताव बिक्री प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, तर तिनीहरू यो पनि स्वीकार गर्दछन् कि विक्रेता प्रस्ताव चरणमा पुग्नु अघि कुराकानीले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लैजान्छ। वास्तवमा ग्राहकहरूको कुरा सुन्न र मार्केटिंगबाट डाटा जम्मा गर्दा तपाईंलाई प्रस्ताव चरणमा पुग्न मात्र मद्दत गर्दछ, तर यसले तपाईंलाई एक धनी मिडिया प्रस्ताव सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन सम्भावितको चाहना र आवश्यकताहरूको लागि अपील गर्दछ।
हामीले टिन्डरबक्समा टोलीसँग काम गरेका थियौं बिक्री सम्बन्धी सक्षमताको वरिपरि केही अनुसन्धान गर्न र यो कसरी देखा पर्दछ कि खेल परिवर्तन हुँदैछ। के तपाईं यी केही बिक्री दुखाई अनुभव गर्नुहुन्छ? तपाइँको संगठनमा बिक्री र मार्केटिंग प What्क्तिबद्ध गर्न के परिवर्तनहरू गरिरहनु भएको छ?
टैग: संचारमार्केटिङबिक्री सक्षमताबिक्री प्रस्ताव
सामग्री कसरी लेख्ने जहाँ दर्शकहरूले तपाईंको मूल्य निर्धारण गर्छन्
SoapUI: एपीआईको साथ काम गर्ने ईन्साइडरको उपकरण